SilentEye: Fihla ifayela ngaphakathi kwelinye | Kusuka kuLinux
SilentEye: Fihla ifayela elilodwa ngaphakathi kwelinye
AthuleEye isicelo esibhalwe ku- Qt lokho kuzosisiza ukusebenzisa i I-Steganography bese ufihla izithombe nomsindo ngaphakathi kwelinye ifayela.
La sthembiso Kungumyalo lapho amasu afundwa futhi asetshenziswe khona avumela ukufihlwa kwemiyalezo noma izinto, ngaphakathi kwabanye, ezibizwa ngokuthi izithwali, ukuze ubukhona bazo bungabonakali. Kuyingxubevange yobuciko namasu ahlanganisiwe ukwakha umkhuba wokufihla nokuthumela imininingwane ebucayi kuthwali engabonakali ...
… Umsuka waleli gama uvela ekwakhiweni kwamagama esiGreki stegans nathi, okusho ukumbozwa noma ukufihlwa, futhi imidwebo, okusho ukubhala.
Qaphela ngaleli thuluzi, ngoba emazweni amaningi ukusebenzisa le ndlela kuyinto KWENZIWE. Ukusetshenziswa kwayo kulula kakhulu.
1- Siphuma ku .deb funa le-url. Kukhona ne- for Mac y Windows.
2- Sifaka ukuncika okulandelayo:
3- Sifaka iphakethe esililandile:
4- Ake siye Imenyu »Izicelo» Izesekeli »SilentEye futhi kufanele sithole into enjengale:
5- Sihudula isithombe.
6- Sicindezela inkinobho Encode.
Lapho singakhetha izinketho eziningana. Singawufihla umlayezo noma ifayela futhi noma ngabe sifuna ukulufihla. Njengoba sikwazi Fihla ifayela noma umyalezo osemfanekisweni, singenza inqubo eguqukayo.
Okuwukuphela kwento embi engiyibonayo ngohlelo lokusebenza ukuthi izithombe zigcinwa ngesandiso .BMP namafayela alalelwayo afana ne- .WAV.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » SilentEye: Fihla ifayela elilodwa ngaphakathi kwelinye
OH !! waaoo !! Ngokwami, lokhu kubukeka kuyindlela enhle yokufihla izinto.
Ungakhombisa ukuthi imaphi amazwe akuvunyelwe futhi ngasiphi isizathu?
Sawubona, akunakwenzeka ukufihla kwezinye izinhlobo zamafayela njenge-mp3 noma i-avi futhi ziyaqhubeka nokusebenza. Ngiyaqonda ukuthi ngekati okufanayo kufinyelelwa esithombeni kepha hhayi kufayela elilalelwayo noma levidiyo.
IMozilla yethula izinxusa zeFirefox, futhi